Na-eri nri a Vampire - ysmụ nwoke Lovehụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Jiri Vampire rie nri nkezi 4.6 / 5 si 29
NA / A, o nwere ihe nlere 95.4K
Adult, Adventure, Drama, fantasy, Manhwa, tozuru okè, Smut, Ebube, Yaoi
N’ịbụ onye ejidere mmekọrịta ọjọọ, Sooin chọsiri ike ịgbapụ. Onye vampire hụrụ ọbara mmadụ na-asọ oyi, Chi-hwan na-a drinksụ naanị ọbara nke vampires ndị ọzọ. Mgbe ohere mere ka ha abụọ nọkọọ, Chi-hwan na-eme Sooin atụmatụ na-adọrọ adọrọ. Chi-hwan ga-enyere Sooin aka ịpụ na hel dị ndụ, na n'ọnọdụ… Sooin nwere ka Chihwan drinkụọ ọbara ya. Nchọpụta a ọ ga-agbanwe ndụ ha ka mma?
Gụọ ọhụụ kachasị ọhụrụ, webtoons adịchaghị, naanị yaoi ogige ịlọ ụwa
N'okpuru ìhè anyanwụ na Bentou Boy
yaoi ogige ịlọ ụwa